ZawgyiGhost ဖောင့် Only Android Version 4.3 (Root) ~ Free Mobile Sharing
ZawgyiGhost ဖောင့် Only Android Version 4.3 (Root)
6:00 PM Android Apps, Android Tutorials5comments
ဇော်ဂျီသရဲဖောင့်လေးပါ ပန့်ပန့်အော်တာမှကြိုက်တဲ့ ကိုကိုမမများအတွက် Zawgyi Ghost Only V4.3 . ttf ဖိုင်လေး လိုချင်သူများ အောက်မှာဒေါင်းယူပါ ။
Android V4.3 တွေရဲ့ ဖုန်းမှာ ( -ျ ) ( -ု ) ( -ူ ) ( -ာ ) ( -် ) ( -့ ) တွေ အထဲကိုဝင်နေတဲ့ပြသနာကို ကျနော်အနည်းငယ်ဖြေရှင်းထားပါတယ် ။
ဖောင့်ပြောင်းနည်းကိုတော့ နားလည်ကြမယ်ထင်ပါတယ် ။ မိမိဖုန်းမှာ Root ရှိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ် ။
( မြန်မာဖောင့် ထည့်နည်း )
အကျဉ်းချုပ်ကတော့ ကျနော့် TTF ဖောင့်ဖိုင်လေးကို သက်ဆိုင်ရာနာမည်ပေးပြီး Root Explorer ဆော့ဝဲထဲကိုဝင်လိုက်ပါ >>> system ဖိုဒါထဲဝင်လိုက်ပါ >>> fonts ဆိုတဲ့ ဖိုဒါထဲကို ထို TTF ဖိုင်လေး ထည့်ပေးလိုက်ယုံပါပဲ ။
ပြီးရင် မိမိထည့်လိုက်သော TTF ဖောင့်ဖိုင်လေးကို RW -- R -- R ဆိုပြီး အမှန်ခြစ်လေး ရွေးပေးရပါမယ် ။
မှတ်ချက် ။ ။ စမ်ဆောင်း 4.3 အထက်ဖုန်းများ မြန်မာစာ 100% မှန်အောင်လုပ်နည်း.... ဘာဆော့ဝဲမှ ထောက်ပံ့ပေးစရာမလိုပါဘူး ကျနော်ပေးထားတဲ့ ဖိုင်လေးကို ညွှန်ပြထားတဲ့ဖိုဒါထဲသို့ ထည့်ပေးလိုက်ယုံနဲ့ မြန်မာစာ100%မှန်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ် ဒီမှာလေ့လာဖတ်ရှု လုပ်ဆောင်လိုက်ပါ
" Zawgyi Ghost Only V4.3 .ttf ဖိုင်အား ဒေါင်းရန် "
ဇော်ဂျီသရဲဖောင့် Zawgyi Ghost Only V4.3 . ttf ဖိုင်ကို Dev-Host လင့်ဖြင့် ဒီမှာဒေါင်းယူပါ ။
ဇော်ဂျီသရဲဖောင့် Zawgyi Ghost Only V4.3 . ttf ဖိုင်ကို Zippyshare လင့်ဖြင့် ဒီမှာဒေါင်းယူပါ ။
ဇော်ဂျီသရဲဖောင့် Zawgyi Ghost Only V4.3 . ttf ဖိုင်ကို pCloud လင့်ဖြင့် ဒီမှာဒေါင်းယူပါ ။
နဲာ မာံ မာံ ဥူ November 8, 2013 at 1:34 PM
ROOT EXPLORERထဲ ထည့်နည်းနဲနဲ လောက်ရှင်ပြ ပေပါအုံး
မျိုးကျော်ကျော် May 19, 2015 at 6:52 PM
file ကိုရွေးပြီး ဖိထားလိုက်ရင် move ဆိုတာပေါ်တယ် ပြီးရင် font folder ထဲသွားပြီး move here ဆိုတာ နိုပ်လိုက်ပါ....
နဲာ မာံ မာံ ဥူ November 8, 2013 at 1:38 PM
သွင်းမတတ်လို နဲနဲံလောက် ရှင်းပြနော် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Mya Soe November 10, 2013 at 6:38 AM
Download လုပ်ပြီး ဖွင့်လိုက်တော့ cann't open this file တဲ့ဗျာ...ကူညီပါအုံးခင်ဗျ
kyaw min tun May 23, 2014 at 5:20 AM
Table3like တွင်​ မြန်​မာဘာသာရှီ​နေပါတယ်​ ဒါ​ပေ့မယ့်​ website​တွေမှာ မြန်​မာစာမမြင်​ရဘူး အဲဒါဘယ်​လိုအလုပ်​ရမလည်းကူညီပါအုံး